“Isbedelka Aragtiyaha Siyaasadeed ee Xusbiyada Caalamka “. | Hargeysa World~Herald
“Isbedelka Aragtiyaha Siyaasadeed ee Xusbiyada Caalamka “.
Uncategorized"Isbedelka Aragtiyaha Siyaasadeed ee Xusbiyada Caalamka ".
Philosopers-ka qaar ka mid ah xisbiyada siyaasaddu ma soo dhaweynayaan hor u socodkooda sooyaal ee hore hodan ugu ahayd dunida sedexad, noocyada axsaabta mamulka oo muran ka jiray muddo tobanaan sano ah. Si kastaba ha noqotee, maanaan helin qaababkii xisbiyada haatan jira ee ku filan dhammaan astaamaha muhiimka ah ee dhinacyada lala macaamilay mugga iyo miisanka xukun laysugu dheeli tirayay, dhamaan meerisyada xisbiyada siyaasadeed ee hadda jira, waa la soo saaray laga soo bilaabo daraasadihii xisbiyada Galbeedka Yurub qarnigii la soo dhaafay – iyo badh. Sidaas awgeed, waxay ku guuldaraystaan inay qabtaan astaamo muhiim ah oo tilmaama xisbiyada qaybaha kale ee adduunka.
Xaqiiqdii tani waa run xisbiyada taas waxaa soo ifbaxay dalal soo koraya oo dadweynahoodu muujinayaan tixgelin qowmiyadeed, diin, ama kala duwanaansho luqadeed, taas oo xisbiyada tartama ayaa inta badan saldhig u ahaa. Xitaa waa run Mareykanka, oo labadiisa xisbi aad loo wada agaasimay si aan caadi aheyn ayey uqalmaan oo leh inta badan magacyada xisbiyada jira.
Markaa laysla qiraayo tabarucyada badan oo daraasado la taaban karo ee xisbiyada ku salaysnaa Maadooyinkaa dhaqameed ee reer Galbeedka Yurub, waxaan aaminsanahay in daraasadaha dhinacyada ka jira gobollada kala duwan ee adduunka si weyn loogu xoojiyo la dib-u-eegis iyo ballaarin ku qornaanshaha noocyada xusbiyada.
Noocyada xisbiyada jira waxay ahaayeen kuwo ku saleysan wajiyo badan oo kala duwan shuruudaha iyo wax yar oo dadaal ahna laguma darin, isku day in la sameeyo noocyada xisbiyada ee ka dhashay inay iswaafaqaan midba midka kale. Qoraallada qaar waa kuwo shaqeynaya, kala saarista qaybaha iyada oo ku saleysan hadaf gaar ah .
Sigmund Neumann wuxuu u kala soocayaa saddex nooc oo xisbiyo guud ahaan: “Qaybaha dano shaqsiyeed ”waxay muujisaa baahiyaha bulsho gaar ah kooxi maamusho”.
“Qeybaha is dhexgalka bulshada” waxay leeyihiin ururo si wanaagsan u dhisan iyo in la siiyo xubno badan oo adeegyo kala duwan leh, iyaga oo awood siinaya Bulshada qayb ahaan, taas oo lagu beddelayo wixii ay ku tiirsan yihiin tabarucaad lacageed iyo adeegyo iskaa wax u qabso ah oo xubnaha ah mudadii ololaha doorashada. “Qeybaha is dhexgalka guud” waxay leeyihiin hammi badan yoolalka qabsashada awoodda iyo isbedelka isbedelka bulshada, dalbashada fullinta iyo u hogaansanaanta xubnahooda.
Herbert Kitschelt wuxuu kala saaraa xisbiyada xooga saara “caqliga doorashada tartan” meeshaas culeys badan ayaa saaran “caqli galnimada matalaadda deegaan.” Iyo Richard Katz iyo Peter Mair waxay si cad ugu sii gudbiyeen, caqligal shaqeynaya Iyaga oo soo dejinaya tusaalaha ‘xisbiga tartanka’, kaas oo lagu maalgeliyo maalgelinta dadweynaha, axsaabta iyo doorka ballaadhan ee dawladdu ku leedahay hoggaamiyeyaasha xisbiyada xayiraad tartanka , oo ay raadiyaan ugu horrayn inay naftooda u sii wadaan xagga awoodda si ay uga faa’iideystaan naftooda kheyraadkan cusub.
Qaab dhismeedka dhinacyada waa inuu si cad ula macaamilaa dhowr nooc oo kala duwan, cabbirrada nolosha xisbiga ee ku lug leh istiraatiijiyadda doorashada ee kala duwan, xagga bulshada matalaad, ujeeddooyinka maamulaha iyo awoodaha hay’adda xukumada.
Xisbiyada qaar waa urur ahaan khafiifsan halka kuwa kalena ay waaweyn yihiin iyo qalafsan, xisbiyada qaarkood waxay si gaar ah ugu dhisan yihiin qowmiyado gaar ah, koox diimeed, ama koox dhaqan ahaaneed, halka kuwa kalena ay yihiin kuwa iswada socda haddii aysan ahayn promiscuously eclectic.
Dhinacyada qaar waxay si cad u yihiin barnaamij ama fikir ahaan, halka kuwo kalena ay yihiin wax-ku-ool ah ama xitaa aan ka hor-tagayn. Xisbiyada qaar waxay si xoogan uga go’an tahay xaqiijinta qaar ka mid ah ujeedooyinka bulshada gaar ah, halka qaar kalena waxay rabaan uun inay ku guuleystaan doorashooyinka.
Noocyada koox ahaan dhuuban midkastoo gudaha ah, waxay ka tirsan tahay “hiddo raac” ballaaran oo noocyada xisbiyada ah: xisbiyada ku saleysan hoggaanka”Elite bases parties”, axsaabta wada-dhisan”mass based parties”, xisbiyada ku saleysan jinsiyada’ “ehtnicity based parties”, xisbiyada doorashada”electoralist parties” iyo xisbiyada dhaqdhaqaaqa”movement parties”.
Qaar badan oo ka mid ah jahooyinkan’, ayaa iyaguna loo kala saaray qaybo hoosaadyo ‘kala-jaad ah’ iyo dhinacyo “pro-hegemonic” xisbiyo daacad ah, xisbiyo dimoqoraadi ah oo ka socda xisbiyo ama axdi-diid ah nidaamyada dimoqoraadiga ah iyo qayb hoosaadyo ku saleysan heerkooda u heellan fikrad ama barnaamij.
Qaar kale waxay arkaan asal ahaan axsaabta siyaasadeed ee siddeetameeyadii Ingiriiska, markay ahayd abaabulka baarlamaanka Taageero iyo isku dayo saameyn ah natiijada doorashada ayaa noqotay su’aalaha walaac muhiim u ah awoodaha, markii Bolingbroke waxay bixisay difaaca ugu horeeya ee muuqaalka mucaaradka, markii uu David Hume wuxu yidhi “kooxaha dulsaarka ah ee ku yimid kalgacayl dawlad laguma dhiso” ifafaalaha ugu badan ee aan la aqbali Karin waxa muuqday arrimaha bini-aadamka, qeybaha ka soo jeeda mabda’a iyo goorta Edmund Burke wuxuu dacwad cad ka dhigay xusbi inuu yahay “jirka ragga oo mideysan ,Mabda ‘gaar ah oo lagu horumarinayo, wanaagga guud ee raga falanqayn xeel dheer oo qoraayaashaas ah iyo horumarka siyaasadeed ee waqtigoodii, Giovanni Sartori wuxuu ogaaday in xitaa fikirka xisbiga si buuxda looma horumarin mana aqbalin.
W/Q. CABDALE GAXNUG.